Onye odeakwụkwọ ọhụrụ India nke Ministry of Aviation kwupụtara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Onye odeakwụkwọ ọhụrụ India nke Ministry of Aviation kwupụtara
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Onye odeakwụkwọ India nke Ministry of Aviation
Shri Rajiv Bansal IAS (NL: 88) ewegharala ọrụ odeakwụkwọ, Ministry of Civil Aviation na Gọọmentị India, osote Shri Pradeep Singh Kharola, IAS (KN: 85) n'ihi nhọpụta ya na Septemba 30, 2021.
Shri Bansal bụ onye ọrụ nlekọta nchịkwa India nke ogbe 1988, sitere na cadaga Nagaland.
O nweela ọtụtụ ọkwá dị mkpa na Gọọmentị Union gụnyere onye isi oche na onye isi njikwa nke Air India Ltd. na Ministry of Aviation.
Ọ rụọkwala ọtụtụ ọkwa dị mkpa n'ime gọọmentị Nagaland.
Ọ rụrụ ọtụtụ ọkwá dị mkpa na Gọọmentị Union gụnyere Onye isi oche na onye isi njikwa, Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Air India Limited, Ozi ụgbọ elu; Onye ode akwụkwọ ọzọ, M/o Petroleum & Natural Gas; Joint Secretary, M/o Eletrọniki & Teknụzụ Ozi; Odeakwụkwọ, Central Electric Regulatory Commission (CERC); na odeakwụkwọ jikọrọ aka, D/o Industrylọ Ọrụ Egwu, M/o Heavy Industries & Public Enterprises.
O nwekwara ọtụtụ ọkwa dị mkpa na Gọọmentị Nagaland gụnyere kọmishọna & odeakwụkwọ, D/o Health & Family Welfare, Nagaland; Kọmishọna na odeakwụkwọ, Ngalaba Mmụta School, Nagaland; Kọmishọna & odeakwụkwọ, ngalaba ego, Nagaland, wdg.
N'ịbụ nke dị na Rajiv Gandhi Bhavan n'ọdụ ụgbọ elu Safdarjung na New Delhi, ndị ọrụ ụgbọ elu na -ahụ maka ịhazi amụma na mmemme mba maka mmepe na nhazi nke ngalaba ụgbọ elu obodo na mba ahụ. Ọ bụ ya na -ahụ maka iwu ụgbọ elu, 1934, Iwu ụgbọ elu, 1937 na iwu ndị ọzọ dị iche iche metụtara ngalaba ụgbọ elu na mba ahụ. Ozi a na -ejikwa njikwa ndị otu agbakwunyere na ndị nweere onwe ha dị ka Directorate General of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security na Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy na ndị ọrụ mmekọrịta ọha na eze dị ka National Aviation Company of India Limited, Authority ọdụ ụgbọ elu nke India na Pawan Hans Helicopters. Obere. Commission of Safety Railway, nke na -ahụ maka nchekwa na njem ụgbọ oloko na arụmọrụ dabere na ndokwa nke Iwu ụgbọ okporo ígwè, 1989 na -abatakwa n'okpuru nchịkwa nchịkwa nke Ministry a.
Directorate General of Aviation (DGCA) bụ ụlọ ọrụ na -ahụ maka ihe gbasara ụgbọ elu, na -eleba anya n'okwu gbasara nchekwa. Ọ bụ ya maka nhazi ọrụ ụgbọ elu na -aga/site na/n'ime India yana maka ịdebe iwu ikuku obodo, nchekwa ikuku na ụkpụrụ iru eru. DGCA na-ejikọkwa ọrụ nhazi yana International Civil Aviation Organisation (ICAO).